प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै आज पनि सर्वाेच्च अदालतको मूलगेट पुगे वकिलहरू ! - jagritikhabar.com
प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै आज पनि सर्वाेच्च अदालतको मूलगेट पुगे वकिलहरू !
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले सर्वाेच्च अदालतको गेटमा धर्ना जारी राखेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा आज पनि उनीहरूले बिहान साढे १० बजेपछि सर्वाेच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका हुन्।
धर्ना दिन सर्वाेच्च अदालतको मूल गेटतर्फ जाँदै गर्दा सर्वाेच्च अदालतमा तैनाथ प्रहरीले कानुन व्यवसायीहरूलाई रोक्न खोजेका थिए, तर त्यसको पर्वाह नगरी उनीहरू धर्नास्थल पुगेका हुन्।
बिहीबार प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बारका अध्यक्ष्य चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित केही कानुन व्यवसायी घाइते भएका थिए। आज भने प्रहरीले कानुन व्यवसायीलाई रोक्न खोज्दा केही बेर सामान्य धकेला धकेलपछि अहिले स्थिति सामान्य छ। ​
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयले लिने गरेको नियमविपरीत शुल्कमा रोक लगाएको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले नियमविपरीत लिने गरिएका शुल्कलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नलिन बिहीबार विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जननमूना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक अभिभावक सङ्घ अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले बहस गर्नुभएको थियो